Valya Kancheva - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Valya Kancheva မဂ္ဂဇင်းအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag ၏အယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။
ငါအငျတာဗြူး၏ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းသို့နစ်မြုပ်အဖြစ်မည်သည့်စာသားသည်၏ပထမဦးဆုံးဖတ်ခြင်း, ငါ့အဘို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာစာသောကွောငျ့, ငါဥပမာအသစ်သောအရာတို့ကိုလေ့လာသင်ယူ, မည်မျှအမျိုးအစားများကိုဘီယာ (ale, lager ... ) ရှိပါတယ်, မူရင်းစိတ်ကူးများ (တစ်ရွက်လှေပေါ်တွင်အသက်ရှင်ရန်,) ဥပမာ, etc သို့သော်ငါ့အားအရေးအပါဆုံးတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံပြင်ငါ့နှလုံးထိမိသောဖြစ်ပါသည်, ငါအဖြစ်အပျက်နှင့်အတူစာနာငါရည်မှန်းချက်, အာရုံနဲ့ Hard အလုပ်နှင့်ဇွဲထံမှရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်အတူကျေနပ်မိပါတယ်။ ငါပင်ငါသည်ကိုယ်အသက်ကို၌ဤဖူးခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်အောင်ကြိုးစားပါ။
ကျွန်မမကြာခဏခက်ခဲကာလ၌ငါ့ကိုကူညီပေးသည်တဲ့ကလေးဘဝကိုမှတ်ဉာဏ်ရှိသည်, ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုအတွက်သူတို့ထဲကအလုံအလောက်ရှိသည်။ ငါ5နှစ်အရွယ်မှာနှင့်ဥယျာဉ်တော်၌အကြှနျုပျကိုအထဲကယူပြီးစဉ်, ငါ့အဘကိုငါ့ကောင်းကင်ပြာကိုကြည့်လုပ်, အဲဒီမှာတစ်နေရာပျံနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ အာကာသအတွင်းလူ! ဒါဟာအစဉ်မပြတ်ငါကြောင့်ဘာမျှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ ... ငါ့အဘို့အံ့ဖွယ်ခဲ့ပေမယ့်တဦးတည်းကစစ်မှန်တဲ့လာချင်သင့်တယ်မသာပေမယ့်အဘို့ကြိုးစားကြသည်သင့်ပါသည်။
ငါအများကြီးအရာနှင့်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ငါပြည့်စုံလိမ့်မည်ကြောင်းအများကြီးပိုရှိပါတယ်။ ရေတိုကာလတွင် - ငါတလျှောက်သွားကြဖို့, ငါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ endurance- ၏အဓိကစမ်းသပ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ဆိုတော့ငါ အယ်လ် Camino.
သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်နာခြင်း, ဇွဲ, သတ္တိနှင့်ဤများ၏ဇွဲရှိ ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယား။ နှင့်ထောက်ခံမှုညာဘက်အချိန်တွင်လာလိမ့်မည်!